रामेन बाहेकका केहि जापानी इन्स्ट्याण्ट खाना | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > FOOD > रामेन बाहेकका केहि जापानी इन्स्ट्याण्ट खाना
खाना पकाउन गाह्रो हुन सक्छ। काममा लामो दिन पछि, कोही पनि भाँडा र भान्छामा श्रम गर्न चाहँदैन। धन्यबाद, अद्भुत जापानी ईन्स्ट्याण्ट फूड मार्केट तपाईंको उद्धारमा आउन सक्छ! यहाँ जहाँ आधा प्रसिद्ध आधा कुख्यात रामेन नूडल्स आए! तर, यदि तपाईले रामेन पर्याप्त खानु भएको छ भने, यहाँ केहि अन्य इन्स्ट्याण्ट जापानी खाना पनि छन्, जुन स्वस्थ पनि मानिन्छ। साथै, यी खाद्य पदार्थहरू सस्तो, बनाउनको लागि छिटो, र अद्भुत कोशेली बन्न सक्ने छन्।
१. ओच्याजुके – ( ग्रीन टि र भात)
नाममा नजानु होस्। यो खान निकै मिठो, तातो, र आफ्नो नाम भन्दा धेरै गुणा स्वादिलो हुन्छ।
परम्परागत रूपमा तातो ग्रिन टि, तातो दासी (जापानी सूप स्टक), वा पकाइएको सेतो चामलमाथि केवल उमालेको पानी खन्याएर बनाईन्छ, यो विभिन्न टपिंग्स जस्तै अचार, अचारको बग्गा, वा सुकेको माछा राखेर खाईन्छ। धेरै स्थानहरूमा टप्पिंगहरूको अझ ठूलो विविधता हुन्छ, उदाहरणका लागि पूर्ण पोर्क कट्लेट। पकाइएको बाँकी चामल प्रयोग गर्ने एक उत्तम तरिका, जापानी व्यक्तिहरूले यसलाई बिहानको खाजा रूपमा खान्छन्।
यस परिकारलाई बनाउने गर्ने एउटा सजिलो तरीका छ, तपाईंले बचेको चावलमा मिसाउनको लागि स्वादिलो मसला किन्न सक्नुहुन्छ! तत्काल स्वादिष्टता। त्यहाँ धेरै ब्रान्डहरू छन् जुन स्थानीय सुपरमार्केटहरू वा सुविधा स्टोरहरूमा भेट्टाउन सकिन्छ, शीर्ष तीन स्वादहरू अचार प्लम, वसाबी, र सुकेको सामनको साथ।
तपाइँका साथीहरूको लागि कोशेली ल्याउनुहोस् वा खानको लागि बचत गर्नुहोस् जब तपाईंलाई जापानको एक सानो रिमाइन्डर चाहिन्छ।
घरमै बनाउन खोज्ने हरुको लागि तलको उपयोगी भिडियो हेर्नु होस्।
२. ओखायु – (जापानी राईस पोरिज)
बाकि भएकोको चामलको आनन्द लिने अर्को तरिका, ओखायु चिसो दिनमा बिहानको खाजामा खाइन्छ, वा बिरामी हुदा खाईन्छ। पश्चिममा कुखुराको सूप जस्तो, यसले तपाईंलाई स्वास्थ्य बनाउन सक्छ, विशेष गरी यदि तपाईंलाई पेट समस्या छ किनकि यो सरल र पचाउन सजिलो छ। नानाकुसागायु (७ वसन्त जडिबुटीहरू) भनिने विशेष ओखायु जनवरी ७ मा खाइन्छ, नयाँ वर्षको राम्रो आशाको लागि। तर यो उत्सवको चिल्लो खाना खाएपछि तपाईंको पेटलाई शान्त पार्ने तरिका पनि हो।
यो जापानी खीरलाई अनन्तसम्म परिवर्तन गर्न सकिन्छ र यसको स्वादहरू पुन: व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, त्यसैले तपाईं यसलाई ओट्मिल वा मुसेलीको कचौराको रूपमा पनि सोच्न सक्नुहुन्छ।
यद्यपि यो घरमै बनाउन सजिलो भएपनि, तपाईं प्याकेट किन्न र समयको बचत गर्न सक्नुहुन्छ। प्याक खोल्नुहोस्, यसलाई कचौरामा खसाल्नुहोस्, र ३ मिनेटको लागि माइक्रोवेभ गर्नुहोस्। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं प्याकेजलाई पानीको भाँडामा ३ मिनेटको लागि उमालेर राख्न सक्नुहुनेछ, कचौरामा खन्याउनुहोस्, र खानुहोस।
३. जापानी करी
जापानी करी एक मनमोहक खाना हो जसले धेरैको मन जित्यो, धेरैले जापानी करीलाई सन्देह गरेर भारतीय करीहरू मात्र खाने भने। तर अहिले जापानी करीको आफनो छुटै बिशेसता छ। जापानी करी यहाको आफ्नै खाना हो, करीबाट प्रेरणा पाएको तर केहि नौलो हुदै गएको। जापानी नौसेना द्वारा सुरुवात गरिएको, जापानी करी पनि धेरै पश्चिमी जापानी फ्यूजन फूड हो जुन जापानमा प्राय: खाइन्छ। अरु केहि हुन् – निक्कुजाग्गा स्टू (मासु र आलु स्ट्यु), ओमुराईस (भातमा ओम्लेट), काचु (पोर्क कटलेट), नापोलितान पास्ता (मिर्च र हट डग ससेजको साथ स्पेगेटी) र यस्तै। यी खानाहरू हरेक स्कूल वा काम क्याफेटेरिया, हरेक घर भान्सा घर, र जापान वरिपरि धेरै रेस्टुरेन्टमा पाउन सकिन्छ।
जापानी करी बेस बिभिन्न प्रकारमा बेचिन्छ, र करी क्युब्सलाई सामान्यतया केवल केही सब्जी र मासु तताउन, तातो पानी थप्दै, र सस पर्याप्त पर्याप्त नहुन्जेल उमाल्ने आवश्यक हुन्छ। कहिलेकाँही, यो केवल धेरै काम हो। त्यस समयको लागि, तपाईं तत्काल करी प्याकहरू किन्न सक्नुहुनेछ।
ओखायु जस्तै प्याक खोल्नुहोस्, यसलाई कचौरामा खन्याउनुहोस ३ मिनेटको लागि माइक्रोवेभ गर्नुहोस्। वैकल्पिक रूपमा, ४ मिनेट को लागी ब्यागमा पानीको भाँडोमा उमालेर, कचौरामा हाल्नुहोस्, र खानुहोस।
करी क्युबबाट करी बनाउने तरिका तल दिईएको छ।
इन्स्ट्याण्ट करी बिभिन्न स्वाद, र मूल्यमा आउछ गुलियो देखि ३० गुणा मुख पोल्ने पिरो खालको सम्म पाइन्छ। त्यसैगरी यो विभिन्न भेराइटिमा पाइन्छ अनेकौ टपिङ्गको साथ्मा किन्न पाइन्छ।
सुशी जापान बाहिर, सुशीलाई फेन्सी फुड रूपमा लिइन्छ किनकी यो अन्य खाना भन्दा महँगो छ। जापानमा पनि केहि सुशी रेष्टुरेन्टहरू धेरै महँगो छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। यद्यपि तपाईले सस्तो र चाँडो सेवा पाइने सुशी पसल पाउन सक्नुहुन्छ जुन सुशीलाई “स्वस्थ फास्ट फूड” को रूपमा वर्गीकृत गराउदैछन। यी पसलहरु देख्दा ठिकै देखिए पनि स्वच्छ…